Qalabka Jikada Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Warshadaha Qalabka Jikada
Sanduuqa qadada korontada waxaa loo isticmaali karaa inuu yahay qado qadada, kariyaha bariiska korontada ku shaqeeya, foornada wax lagu kariyo, digsiga maraqa lagu kariyo, dheriga wax lagu kariyo, qaabka jirka oo yar yar, sida cuntada ugu fiican xafiiska ama guriga. Naqshad gaar ah oo casriyeysan oo kuleylinta ah ayaa hubineysa in cuntadaadu si siman u kululaato, waxaadna weli ku raaxeysan kartaa cuntooyinka dhadhanka wanaagsan ee asalka ah. Miisaanka sanduuqku waa 0.84KG wuxuuna u dhigmaa sanduuqa qadada galaaska ah. Wax walwal ah kama qabin baxsiga markii aad ku rido boorsada gacanta.
Juicer Qunyar-socod ah oo Lagu Mashiinka Mashiinka ah: Xarunta nafaqada ee carruurtaada iyo qoyskaaga. Juicer-ga mastating gaaska waa juicer saxaafadeed qabow oo la qaadan karo, is haysta, culeyskiisu yar yahay oo USB ku shubanaysa, qaado oo kaliya, waxaad heli doontaa casiir cusub, dhadhan fiican leh oo caafimaad qaba meel kasta, wakhti kasta, xitaa ganacsiga, safarka ama guriga. Ka hor tag oksaydh, ku sii daa sii daayo nafaqooyin badan casiirka, waxay ku siinayaan casiir nafaqo badan leh. Xitaa saxarka waxaa loo isticmaali karaa macaanka, cunista suxuunta iyo waxyaabo kale oo badan.